FINOANA SILAMO : Tapitra ny andron’ny alarobia 05 jona teo ny volana ramadany
Natokan’ny fitondram-panjakana ho andro tsy fiasana, kanefa andraisan-karama io andron’ ny alarobia 05 jona io, araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-191 mirakitra ireo tetiandro tsy fiasana kanefa andraisan-karama mandritra ity taona 2019 ity. 6 juin 2019
Nanamafy izany Razafimanantsoa Jerson, tale jeneraly eo anivon’ny Minisiteran’ ny asa sy ny fampananan’asa ary ny lalàna sosialy. Raha saika nitontona ny talata 04 jona teo io andro tsy fiasana io, araka ny naoty nivoaka tamin’ iny herinandro lasa teo iny, dia nasiam-panitsiana indray izany araka ny fanambaràna efa hitantsika ireny. Io rahateo ny anton’ny fanambaràna ofisialy nataon-dRavelomahay Lahiniaina Fitiavana, prefen’i Mahajanga tamin’ireo haino aman-jery misy eto an-toerana, ny alatsinainy teo, noho ny fifandaminana sy fifanantonana tamin’ireo olobe mpandala ny finoana silamo. Saika niteraka resabe ho an’ireo mpino silamo eto Mahajanga mantsy ny fankalazana ny "Aid El-fitr", na ny famaranana ny iray volan’ny fifehezam-bava teo amin’ireo mpino silamo nanatanteraka izany.
Misy ny milaza ho nahita ny tsinam-bolana voalohany ny talata 04 jona ka saika efa nankalaza izany famaranana ny ramadany izany na io "Id" io. Ary misy indray ireo « Oustaze » na ireo mpampianatra ny fandalanam-pinoana silamo milaza fa ny andron’ ny 05 jona vao tena feno 30 andro ny fotoanan’ ny fifehezam-bava, ka tsy iadian-kevitra ny fahitana ny tsinam-bolana voalohany, fa io fetr’andro fahatelopolo naharetan’ny ramadany io no hikajiana ny fankalazana ny "Aid El-fitr". Rehefa natao anefa ny marimaritra niraisan’ireo mpino silamo sy ny fitondram-panjakana izay nanome herijika ny mpino silamo amin’ny fanajana io andron’ ny "Id" io, dia raikitra fa ny andron’ ny 05 jona ny fankalazana miaraka ity fotoan-dehibe eo amin’ny finoana silamo ity.
Sambany izao ary nidera ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina ny mpino silamo manerana an’i Madagasikara tamin’ity fanokanana ho andro tsy fiasana kanefa nandraisana karama ny andron’ ny alarobia 05 jona ity ho fanajana io "Id" io. Tokony hifanaja ihany koa ny samy mpino silamo eo amin’ny tetiandro iarahan’izy ireo hankalaza izany. Raha ny fanjakana aza efa ho nanao zava-dehibe io andro io ho tsy niasan’ny rehetra fa kosa handraisan-karama. Na mpandala ny finoana silamo na ny finoana hafa miasa amin’ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana dia samy niara-nisitraka izany avokoa.
Nirary soa ho an’ny mpino silamo namany sy ireo rehetra nahavita hatramin’ny farany io fifehezam-bava nandritra ny iray volan’ny ramadany io sahady ny Oustaze Badroudine, iray amin’ireo mpampianatra no sady mpandalina akaiky ny finoana silamo eto Mahajanga.
Nanambara moa ity farany fa ny fankalazana ny "Aid El-fitr", dia fotoana iray hanomezan’ny mpino silamo iray ny fanampiana ho an’ireo olona sahirana mba ahafahan’izy ireny miravoravo miaraka amin’ireo namany avy. Ka raha misy vokatra mampisongadina ny firenena iray, dia tsy maintsy animbinana telo kilao isany avy omena ireo olona sahirana ireo. Ho an’i Madagasikara izay sompitry ny famokaram-bary dia mazava ho azy fa tokony homena vary milanja telo kilao avy ireo olona sahirana mandritra ny fetin’ ny "Aid El-fitr" io. Izay tsy voatery hitovy amin’ireo firenena maro manerana an’izao tontolo izao ny fanomezana, arakaraka ny vokatra misy ao amin’ireny firenena ireny no animbinana ho an’ireo olona mahantra mandritra ny fankalazana ny "Aid El-fitr" io.
Nakotrokotroka ny fanamarihana ny Aïd-El Fitr teto Antananarivo
Nomarihina omaly alarobia 05 jona ny Aïd-El Fitr, fety silamo isan’ny lehibe indrindra nanamarihana ny famaranana ny ramadany sy ny iray volan’ny fifehezan-tena. Niraisan’ny mpino silamo maneran-tany io andro io ary tsy diso anjara tamin’ ny fankalazana izany ny teto Madagasikara. Nakotrokotroka tanteraka ny fankalazana raha ny an’ny mpino silamo teto Antananarivo sy ny manodidina no asian-teny.
Velom-pisaorana tamin’ny finiavana nasehon’ny fitondram-panjakana sy ny famaliana ny hetahetan’izy ireo ny mpino silamo eto Madagasikara ary nanambara ny tompon’ andraikitra fa : “Sambany tamin’ny tantaran’ity nosintsika ity no nomen’ny fanjakana andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny mpino silamo teto Madagasikara, tena manaja tanteraka ny demôkrasia ny fitondram-panjakana.” Fanamafisam-pinoana, fanaovana asa fanasoavana ny mpiara-belona ary fety ao anatin’ny fanehoana firaisankina eo anivon’ny samy mpiara-belona sy ny fiaraha-monina ny Aïd-El Fitr eo amin’ny mpino silamo. Mandritra io fotoana io ihany koa no anaovan’ny mpino silamo fiantrana sy fizaràna fanomezana ho an’ireo tsy manan-katao. Misy ny fifamangiana isan-tokantrano ataon’izy ireo mandritra io fotoana io ary misy ihany koa fihetsiketsehana ara-panahy.
Araka ny fanazavana, dia andro lehibe mitovy lenta amin’ireo fety masina sy daty tsaroana manokana amin’ny finoana krisitianina ny Aïd El-Fitr ary misy fombafomba sy adidy ataon’ny mpino silamo rehetra rehefa Aïd El-Fitr tahaka izao. Voalohany amin’izany ny fitrotroana am-bavaka io andro io ka ny mpino silamo rehetra no miara-manatanteraka azy. Maraina vao mifoha amin’ny andron’ny Aïd El-Fitr no atao io fitrotroana am-bavaka io ary tanjona ny fampahafantarana an’i Allah ny fankasitrahana, fitalahoana ary fanompoana azy. Amin’ny tapak’andro hariva kosa no hanehoana ny hafaliana amin’ny maha olona ka samy mampiseho amin’ny fomba rehetra ny hafaliany ny tsirairay ary ao anatin’ny fanajana sy ny tsy fihoaram-pefy no hanehoana izany.
Marcos. sy N.A